By girlish enhle,
Sekuyisikhathi sokupholisa phansi nesimo sengqondo sasebusika esidabukisayo. Imvula ivuselela impilo yonke ebuthongweni, futhi igcwalise nxazonke ngokuphila.
Manje sekuyisikhathi sokucabanga ngendlela yokuletha imvelo ngokulandelana emva kokupheka isikhathi sokushona, ukulahlekelwa amakhilogremu angaphezulu emva kwemikhosi yemikhosi nemikhosi, kahle, ihlobo lizungeze ekona, yisikhathi sokuphumula kanye nokuphumula. Ukuletha isibalo ngokulandelana kuzosiza ekudleni kwentwasahlobo.
Njengoba umzimba uyingqayizivele ngalesi sikhathi sonyaka ukuqeda ama-kg kilogram engadingekile, ukudla kuzoba lula futhi kubusheleleke ngokwanele. Ngesikhathi uhlala ekudleni, ungalahlekelwa ku-10-15 kilograms yesisindo esiningi ngokwezinyanga ezimbalwa. Inani lamakhilogremu alahlekile futhi lithinta izici zomuntu ngamunye kanye nesisindo sokuqala, ngoba abantu abanesisindo abasondelene kakhulu nesisindo somzimba kancane kancane kunalabo abanokuphambuka okukhulu kunomkhuba. Ukuphumelela kokudla kwe-Spring akufanele nje kuphela ekudleni okhethekile, lapho izithelo nemifino esanda kutholakala khona, kodwa futhi ubude bayo. Njengoba izidlo eziningi zesikhathi esifushane zinikeza umphumela wesikhashana. I-Spring yokudla izokusiza ukuba ujwayele ukudla okulinganiselayo, uhlanze umzimba wezinto ezimbi futhi ubeke umthambo emzimbeni. Ngenxa yalokho, ama-pounds alahlekile azokushiya isikhathi eside.
Ngakho-ke, ake sibone ukuthi yimiphi imikhiqizo engcono ukuyisebenzisa ngesikhathi sokudla. Imenyu yokudla kwentwasahlobo, eyenziwe ngokuzimela, kuye ngokuzikhethela, kufanele ifake imikhiqizo elandelayo: imifino entsha neyilisiwe, i-veal ebilisiwe kanye nenkukhu ebilisiwe (umthombo wamaprotheni okudingekayo wokuqinisa ukuzivikela), inhlanzi yamafutha aphansi, imikhiqizo yobisi enezinto ezincane ezinamafutha. Imifino ingabuye isetshenziswe ngendlela yama-saladi ahlukahlukene kanye nama-vinaigrettes, ungacima futhi upheke umbhangqwana, upheke isobho semifino. Ukusebenzisa nsuku zonke ingilazi ye-yogurt eqoshiwe enezithelo ezintsha kuyoba usizo kakhulu. Gwema ingulube, iwundlu, inyama yenkomo, ukudla okunezinongo, okusawoti nokuthosiwe.
Inani lokudla kufanele libe izikhathi ezingu-4 ngosuku, kunesidingo ngaphambi komzwelo wokuzizwa, kodwa ungadli. Vumela umzimba uzinqume ngokwawo ukuthi udinga kangakanani. Kunconywa ukuthi uphuze amanzi amaminerali angabonakali kanye nama-freshly pressed juices.
Ukudla Spring kusho ukudla kwe-vithamini, futhi kunomphumela wokuhlanza.
Ukudla okunempilo kakhulu kuleli sonto
Ukudla kwabavila - imenyu yansuku zonke
Ukudla kwamaShayina ukulahlekelwa isisindo esisheshayo - imenyu
Ukudla okunomsoco we-dysbiosis
I-Bra yabesifazane abakhulelwe
Kombilipen - imijovo
Indlela yokuphambanisa imisipha ye-oblique yomshini?
Isilinganiso emshini wokuwasha
AmaShayina athembisa umengameli weReal Madrid ukuthi athengise uCristiano Ronaldo
Izicathulo ze-fashionable zasehlobo 2014
UHarvey Weinstein noGeorgina Chapman bavumelana ngokuhlukaniswa kwempahla, kodwa ungasheshi ukuhlukanisa
Loch Ness Monster - amaqiniso athakazelisayo nokucabanga ngeNessie
I-Tokyo National Museum
Ufuna ukuhlala kanjani?
Imibono engu-15 yokuqala ye-nail design
Ukufa kwe-fetus ekufubeni